केशव थापा - कान्तिपुर समाचार
केशव थापाका लेखहरु :
अछामको बलात्कार मुद्दाको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन [फोटोफिचर]
अछामको बलात्कार घटनाको फैसला विरुद्ध शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । ‘अछाम फैसला मान्दैनौं, ‘महिलामाथिको शोषण बन्द गर’, ‘पितृसत्तात्मक व्यवस्था मुर्दावाद’, ‘भ्रष्ट न्यायालय मुर्दावाद’ लगायत नारा लेखिएका ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । अछाम जिल्ला अदालतले किशोरी बलात्कारको मुद्दामा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र खेदजनक रहेको भन्दै उक्त फैसलाको विरोधमा प्रतिरोध जनअधिकार आन्दोलनले प्रदर्शन गरेको हो।
एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन र आमसभा [फोटोफिचर]
फाल्गुन २०, २०७८
प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध साना वामपन्थी दलहरूले राजधानीको खुला मञ्चमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नेकपा मसाल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीले संयुक्त रुपमा विरोध सभा गरेका हुन् ।
बालुवामा भेटिएको मूर्तिको संग्रहालय यात्रा [तस्बिरहरू]
सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती खोलामा बालुवाको काम गर्ने मेलम्ची, बरेटारका तामाङ दाजुभाइले एक महिनाअघि बालुवाकै थुप्रोमा आकर्षक हिन्दु भगवतीको मूर्ति फेला पारे ।
सिन्धुलीको करङे डाँडामा डढेलो [तस्बिरहरू]
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–१, नेपालथोकको करङे डाँडामा आइतबारदेखि लागेको डढेलो सोमबार दिउँसोसम्म नियन्त्रणमा आएको छैन । हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभए पनि डढेलोसँगै हावाहुरी लागेपछि स्थानीयहरूले जंगल नजिकैका घरहरु खाली गर्न थालेका छन् । स्थानीयले डढेलो निभाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन ।
बलात्कार र हत्याको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन [तस्बिरहरु]
बैतडीमा १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा शनिबार पनि काठमाडाैंमा प्रदर्शन गरिएको छ । पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थी बागबजारदेखि माइतीघरसम्म विरोध जुलुसमा सहभागी थिए । जुलुसमा उनीहरुले कालो पोसाक, निधारमा कालो पट्टीका साथै मुखमा पनि कालो टेप टाँसेका थिए । यसका साथै उनीहरु अनुहारमा र‌ंग समेत पोतेर प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरुले 'महिला कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक ?', 'एम आई द नेक्स्ट ?', 'कहिलेसम्म योनीमा मृत्यु बाेकेर हिँड्ने ?' लगायतका विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रस्तुत गरेका थिए ।
महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यका लागि सिंहदरबार महिला मार्च [तस्बिरहरु]
न्याय र समताका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार सिंहदरबार महिला मार्च निकालेको छ । महिला हिंसा र दण्डहीनताका अन्त्यको माग गर्दै बसन्तपुरमा भेला भई न्युरोड–रत्नपार्क–भद्रकाली हुँदै सिंहदरबारको अगाडिको सडकसम्म महिला मार्च निकालिएको हो । मार्चपछि भद्रकालीमा हुने सभालाई विभिन्न वक्ताले सम्बोधन गर्ने, विभिन्न स्रष्टाले कविता वाचन गर्ने तथा शिल्पी थिएटरले नाटक मञ्चन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
हाफ सटर : लकडाउन जिन्दगी [तस्बिरहरू]
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पसल खोल्न अवरोध नगर्ने निर्णय गरे पनि प्रहरीले भने कडाइ गर्ने गरेकाे छ । प्रहरीले न्युरोड, इन्द्रचाेक, असनसहित काठमाडाैं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा खुलेका पसललाई बन्द गराउँदै हिँड्ने गरेका छन् । यही डरले व्यापारीहरु आधा सटर खोलेर प्रहरीसँग लुकीलुकी व्यापार गर्न बाध्य बनेका छन् । सरकारले लकडाउनकाे मोडालिटीमा कुनै परिवर्तन नगरेको बताउँदै प्रहरीले लकडाउन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिरहेको बताएकाे छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण न्यूनिकरणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनले दुई महिना नाघिसकेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले म्याद बढाउँदै लगेको हो । यसबाट देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ भने काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका नागरिक कष्टकरपूर्ण दैनिकी गुजारिरहेका छन् । लकडाउन अब कहिले हट्ने भन्ने एकीन भइसकेको छैन । यद्यपि सहरी क्षेत्रका नागरिक घरमै बसेर दैनिकी चलाइरहेका छन् भने कतिपय युवा सडक खाली भएको मौकामा खेलकुदमा सहभागी भइरहेका छन् । केही मजदुरहरु निर्माण स्थलमा खटिरहेका छन् भने उपत्यका वरपरका किसानहरु भने रोपाइँमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
यसरी गरियो स्वयम्भू स्तूपा परिसरमा सरसफाई [तस्बिरहरु]
२५६४औं बुद्ध जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा स्वयम्भू र पाटनका स्थानीयहरुले स्वयम्भू स्तूपा परिसर सरसफाई र मर्मतसम्भार गरेका छन् । महिनेपिछे गर्न गाह्रो भएकोले स्वयम्भू स्तुपाको मर्मत सम्भार वर्षमा एकचोटी बुद्ध पूर्णिमाको अघिल्लो दिन गर्ने गरिन्छ ।
पानी, ग्यास र पूजा (फोटो)
लकडाउनको पाँचौं दिनको बिहान राजधानी काठमान्डु सुनसान देखियो । बिहानको एक फन्को लगाउँदा सिंहदरबार, बानेश्वर, भद्रकाली तथा मैतीदेवी क्षेत्रमा लगाउँदा सडकमा चलहपहल निकै कम देखियो ।